कस्तो कार रोज्ने ? | गृहपृष्ठ
Home यातायात कस्तो कार रोज्ने ?
on: २७ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०९:०० यातायात
महँगो गाडी किने पनि त्यसमा भएका विशेषताबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । गाडीको बारेमा आफूले ध्यान दिन नपाएको र आफ्नो चालकलाई थाहा भएको सवारीधनी बताउँछन् । यस्तै कतिपय चालकहरू ‘गाडीको बारेमा साहूलाई थाहा होला, आफूलाई त गुडाउन मात्रै आउँछ’ भन्छन् ।
महँगा कारमा खासगरी सुरक्षा प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यी प्रविधिको ज्ञान खरीदकर्ता र चालकले थाहा पाउनैपर्छ । कार महँगो हुनुको कारण पनि त्यसमा प्रयोग हुने सुरक्षा प्रविधिले गर्दा हो । प्रविधिको विकाससँगै कारमा पनि सुरक्षाका विभिन्न साधनको प्रयोग हुन थालेको छ । एयर ब्याग, उच्च गुणस्तरका सीटबेल्टलगायत साधन आप्mनो कारमा राख्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । साथै, आफूले किन्न लागेको कारमा के कस्ता एसेसोरिज छन् भन्नेबारे पनि बुझिराख्नुपर्छ ।
इनर्सिया रिलयुक्त सिटबेल्ट
कुनै पनि कारका लागि सिटबेल्ट अनिवार्य सुरक्षा सामग्री हो । सिटबेल्टविना जहिले पनि यात्री असुरक्षित हुन्छन् । सिटबेल्टले यात्रीलाई अगाडि हुत्तिनबाट बचाउँछ र दुर्घटनाको समयमा पनि सुरक्षा प्रदान गर्छ । चलिरहेको गाडी अर्को गाडी वा कुनै वस्तुसँग ठोकिएमा यात्रु वा ड्राइभर सधैं अगाडि हुत्तिन्छ, जसले गर्दा चोटपटक लाग्ने हुन्छ । यस्तो दुर्घटनाबाट बच्न सिटबेल्टको डिजाइन गरिएको हुन्छ । दुर्घटनाको समयमा सीट बेल्ट चुँडियो भने त्यो सिटबेल्टको अर्थ हुन्न । त्यसैले, सिटबेल्ट यात्रुलाई चारैतिर बेरेर सही पोजिशनमा राख्न सहयोग पु¥याउने खालको छ कि छैन, त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ । गाडी खरीद गर्दा सिटबेल्ट इनर्सिया रिलद्वारा सुसज्जित छ कि छैन हेर्नुपर्छ । इनर्सिया रिल छ भने त्यसले कम स्पीडमा लचिलो र बढी स्पीडमा एकदमै कसिन्ने काम गर्छ । आधुनिक सिटबेल्टमा प्रिटेन्शनर हुन्छ, जसले गाडी ठोकिएको अवस्थामा यात्रुलाई कसेर राख्छ र शरीर अघि बढ्न दिँदैन ।
महँगा कारमा एयर ब्याग अनिवार्य रूपमा जडान गरिएको हुन्छ । एयर ब्याग महँगो सुरक्षा सामग्री हो । यस कारण कारमा यसको प्रयोग नगरिएको पनि हुन सक्छ । दुर्घटनाको बेला एयरब्याग फुलेर मानिससँग टाँसिन आउँछ, जसले गर्दा ठूलो चोटपटक हुन पाउँदैन । यो सामान्य अवस्थामा कहाँ जडान गरिएको छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । कुनै कुनै गाडी उत्पादक कम्पनीले एयर ब्यागलाई सिट बेल्टसँग संयोजन हुनेगरी बनाएका हुन्छन् । यसलाई सप्लिमेण्टल रिस्ट्रेण्ट सिष्टम अर्थात् एसआरएसको रूपमा समेत डिजाइन गरिएको हुन्छ । त्यसैले, कार खरीद गर्दा एसआरएस एयरब्याग भए÷नभएको बुझ्नुपर्छ ।
वास्तवमा कारमा भएका विभिन्न प्रकारका सेन्सरले कारको स्पीड डाटालाई नियमित रूपमा एयरब्याग कण्ट्रोल युनिट अर्थात् एसीयूमा पठाइरहेका हुन्छन् । कदाचित् अचानक कार ठोकिएर स्पीड बढेमा वा घटेमा एसीयूले जेनेरेटर प्रोपेलेण्टमार्फत ग्यास निकाल्न सहयोग पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा २० देखि ३० मिलिसेकेण्डमै त्यहाँ भएको नाइलन एयरब्याग फुक्छ र बेलून ठूलो हुन्छ ।
एण्टिलक ब्रेकिङ सिष्टम
सस्ता ह्याचब्याक कारबाहेक अन्य सबै कारमा एण्टिलक ब्रेकिङ सिष्टम (एबीएस)को व्यवस्था हुन्छ । यसले इमर्जेन्सी परेका समयमा टायरलाई लक हुनबाट रोक्छ । यो कार चलाउने डाइभरका लागि पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण मानिएको छ ।
इलेक्ट्रोनिक स्ट्याबिलिटी कण्ट्रोल (ईएससी)
ईएससी आधुनिक कारमा राखिएको एउटा प्रणाली हो, जसले आवश्यक समयमा स्वचालित रूपमा ब्रेक लगाई गाडीलाई नियन्त्रण बाहिर जानबाट बचाउँछ । ड्राइभरले स्टेयरिङ कण्ट्रोल गर्न नसकेको ईएससीले थाहा पाएपछि स्वचालित रूपमा ब्रेक लगाई गाडीलाई ड्राइभरको नियन्त्रणमा लिन सहयोग पुर्‍याइदिन्छ । आधुनिक ईएससी प्रणालीले ट्र्याक्शन कण्ट्रोल सिष्टमसँग मिलेर पनि काम गर्छ, जसले इञ्जिनको पावर घटाएर ओभर स्टियर वा अण्डर स्टियरको अवस्थामा गाडीलाई नियन्त्रणमा राख्छन् । ईएससी सिष्टमले गाडी अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्न लागेको जानकारी ड्यासबोर्ड माउण्टेड लाइट अथवा डिस्प्लेको सहायताले ड्राइभरलाई समेत दिन्छ ।
कुनै कारमा यो एबीएस सिष्टम भएन भने टायर लक हुने र गाडी स्किड हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यो इलेक्ट्रोनिक स्ट्याबिलिटी प्रोग्राम ईएसपी एक कम्प्युटराइज्ड प्रणाली हो, जसले कारको कुशलतासमेत बढाउँछ । ईएसपी लगाउनेबित्तिकै कार गलत दिशामा गइरहेको भए तापनि यसले तुरुन्त बे्रकलाई सक्रिय बनाउँछ ।
एड्जष्टेबल हेड रिस्ट्रेण्ट्स
कार किन्नुअघि हेड रिस्ट्रेण्टसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सामान्य अवस्थामा पनि टाउको अड्याएर यात्रा गर्दा सुविधाजनक हुन्छ । यसको प्रयोग गाडीमा सवार हुँदै गरिएन भने दुर्घटना हुँदा गर्धनमा गहिरो चोट लाग्छ । कारको सिटबेल्टको साथमा हेड रिस्ट्रेण्ट्स पनि दिइएको हुन्छ ।
रियर वाइपर र डिफगर
रियर वाइपर र डिफगर देख्दा सामान्य लागे तापनि यी पनि महŒवपूर्ण सुरक्षा सामग्री हुन् । कारको अगाडि र पछाडिको स्क्रीन गाडी चलाउँदा चलाउँदा फोहोर हुन सक्छ । चिसो याममा त यसमा पानी जमेको हुन्छ, जसले गर्दा ड्राइभिङमै समस्या आउन सक्छ । कारमा रियर वाइपर छ भने स्क्रीन सफा गर्न सकिन्छ । डिफगरको मद्दतबाट कुहिरो लागेको समयमा पनि अगाडिको दृश्य स्पष्ट हेर्न सघाउ पुग्छ ।
कार खरीद गर्नुपूर्व त्यसका लागि कति बजेट छुट्ट्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसो गर्नाले कार खरीदका लागि बजारमा निस्कँदा अलमलमा परिरहनु पर्दैन । बजारमा एकै कम्पनीले निर्माण गरेका करीब ३० देखि ४० हजारको फरकमा विभिन्न विशेषता भएका गाडी पाइन्छन् । त्यस्तै, लक्जरी कारको सवालमा भने केही लाख रुपैयाँसम्म फरकमा यो सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।
कार खरीद गर्दा ध्यान दिनैपर्ने अर्को विषय हो– बडी स्टाइल । खरीद गर्न लागेको कारमा आफ्ना लागि आवश्यक र उपयुक्त ‘स्पेस’ उपलब्ध रहे÷नरहेकोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा कसैलाई सानो आकारको कार नै उपयुक्त हुन सक्छ भने कसैलाई ठूलोको आवश्यकता हुन्छ । साधारणतया शहरी भेगको यात्राका लागि तथा साना परिवार भएकाहरूका लागि ‘ह्याचब्याक’ राम्रो हुन सक्दछ । त्यसैगरी ठूला परिवार भएका तथा धेरै सामान बोक्नुपर्नेका लागि भने एमभीपी (भ्यान आकारको कार) उपयुक्त हुन सक्छ । त्यसैले, कार खरीद गर्नुपूर्व बडी स्टाइलबारे पनि आवश्यक जानकारी लिनुपर्छ ।
कारको छनोट गरेपछि ध्यान दिनुपर्ने महŒवपूर्ण पक्ष हो– कारले गर्ने इन्धन खपत । आम्दानी र कारले खपत गर्ने इन्धनको मात्रा आफ्ना लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्नेमा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साना इञ्जिनको प्रयोग हुने कार तुलनात्मक रूपमा ठूला इञ्जिनयुक्त कारभन्दा बढी मितव्ययी हुन्छ । त्यसैले, कम इन्धन खपत गर्ने कार चाहनेका लागि साना इञ्जिनको प्रयोग गरिएका कार उपयुक्त हुन सक्छ । तर, इन्धनको खपतले खासै असर नगर्नेहरूका लागि भने ठूला इञ्जिन भएका कार उपयुक्त विकल्प छ ।
सस्तो मूल्यका कार चलाउन तथा मर्मत गर्न पनि सस्तो नै हुने गर्दछ । पुराना पुस्ताका कार उत्पादकहरूले सस्तो मूल्यमा समेत विभिन्न मोडलका कार उपलब्ध गराउने गरेका छन् । साथै, विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य समयमा तिनको स्पेयर पार्ट्सको मूल्यसमेत सस्तो हुने गर्छ । मर्मत खर्च बेहोर्न कठिन हुनेका लागि लामो समयको सर्भिज प्याकेजसहितका कार खरीद गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नयाँ कार सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि पुरानाका तुलनामा राम्रो हुने पक्ष भने भुल्नुहुँदैन ।